UGuerlain Idill - inqumba entsha
Lithetha ukuthini igama? URose uyamotheka njenge-rose, aze amthiye i-rose, nangona kungenjalo ". Ukuze i-rose iphofise ngokwenene, i-Perfumery Guerlene yayiyimfuneko yokumakhela isiqhamo esineziqhamo kunye neentyantyambo zeentyatyambo, ize ibeke phezu kwimbumba ye patchouli ne-musk emhlophe. Kwaye isonka esiqhelekileyo sasinamandla kwaye siqhakazile, njengoko iimvakalelo zinyaniso zivakalayo.
Ngoko i-perfume uGulainlain Idill yabonakala - i-fragrance entsha-i-rose, engazange uyifumane.
Ientyatyambo ezimnandi sele ziyeke ukuba zibe ngokwazo, ziphendukele zibe ngumqondiso. I-Rose inokuthi ithandeke emhlabeni kunye nokuphelela kwasezulwini, ubomi bokunethezeka nokufa, ukuzala kunye nobuntombi. Iipalali eziphosiweyo eziphosakeleyo zibonakala zifihla imfihlo yobomi ngokwazo. Kwababhali bemithi, indlovukazi yeentyantyambo ibonakalisa ubulumko, izazi zeemfundiso kunye naba-esotericist - uMama kaThixo, uMama Wehlabathi. Kwaye amaGrike amandulo anikezela le ntyatyambo kumthikazikazi uAphrodite-kuba kubo kwakuthetha uthando olungunaphakade. UGuerlain Idyll - umfazi okwenene unokuziqhenya ngokuvumba kwam.
U-Rose uyayithanda ngokwenene, kuba idibanisa ngokwazo zonke ixabiso elibhekiswe kulo. Siyabulela ukuthanda, sinokuzonwabisa, iintaba zokomoya, kunye nexabiso leemfihlelo ezithembekileyo, kunye "nobulumko bothando abathandi" kunye nethemba lobomi obungunaphakade.
Abathandekayo bafa, uthando alufi. Yonke le yayiyiwaka eliphindwe kabini kwaye iya kuphinda iphindwe kwakhona: umdlalo weembonakalo, ukuthinteka kwezandla, ukutshitshisa okutshisayo ebumnyameni obumnyama, isingqungquthela seentliziyo, isantya kunye nesisa, kunye nokuqinisekiseka okungekho mntu wathanda ukutshisa, ugcwele, ungapheli njengathi. Uthando lunamawaka obuso. Yingakho kunzima ukuthetha ngako kwaye kulula ukuphupha. UGerlen wenza into engenakwenzeka - wayethetha ngoluthando ngolwimi lwevumba.
Xa i- Perfumer uGerlene Thierry Wasser yadala uGerlain Idill - isiphunga esitsha, wayethandana ngothando kwaye uyavuya. Indlela yokuxelela ihlabathi lonke ngeemvakalelo zakho, indlela yokuwuthululela kwibhotile yeziqhumiso ezingatshitshwanga, ukuze amawaka kunye namawaka amadoda namabhinqa, athobise iphunga, abe nofana? Inkosi yathabatha inqabileyo ehlabathini kwiBulgarian yaza yamnceda "isihlobo" sayo sokudala i-Plessy Robinson, eyaziwayo ngenxa yeqhumiso elincinci. Inqaku eliphambili elivakalayo elivakalayo, lalijikelezwe ngephunga le-lychee, i-raspberry, i-freesia, i-lily ye-valley, i-lilac, i-jasmine, kodwa yenza ngobuchule kangangokuba i-parfum ayizange ibe yintsimi enemibala, njengokuba kunjalo kwimeko elolo hlobo.
Uhlobo oluqhelekileyo lwe- rose fender luseburhulumenteni kwi-bouquet kaGuerlain Idyll - i-fragrance entsha, kuphela ehamba ngendlela eyahlukileyo ejikeleza intloko, ukukhathaza iimvakalelo kunye nezikhumbuzo eziphazamisayo ezilele.
Igama liza ngokwalo - emva koko, luyintoni uthando olungunaphakade oluhlala luvuyo, ungayithandi njani? Unako okanye awukwazi ukukholelwa kuyo, kodwa umfanekiso walo othe ngqo siwuphethe entliziyweni yethu. Usibuyisela kuthi xa sithandana kwaye saphinda singene kwiintlanganiso, ukuvuma, ukumomotheka, ukujonga, ukutshintshana, kumanga ... Ukuphupha kothando, sifuna ukusho: "ngonaphakade." Yeka, mzuzu, uphelele.
UGuerlain Idill - ukuvumba komtsha ngumzuzwana obanjwe xa sasivuyayo, solulelwe ngonaphakade. Lo mzuzu ungabizwa ngokuba yigolide, ngoko ibhotile ikhanya ngegolide. Iphupha labalimi bemvelo kunye nentsingiselo yelitye lefilosofi, kucatshulwa ngokufanelekileyo njengophawu olungunaphakade.
Ukuphupha kwothando , ngoku siyakwazi ukubeka phezu kweshefu ifumane layo. Indlela yokuyigcina kunye nani ixesha elide, imini kunye nemini. Kule nto, uGuerlain uhamba kunye ne-Idill kunye neqela loxhaso-iinguqu ezine kwiingqungquthela zobumnandi obungunaphakade. Le dilesi i-gel, ubisi kunye nekhilimu yomzimba, kunye ne-deodorant. Ziyabonakala ngokulula ngamaqhekeza aphinda iindwangu ezihamba kakuhle zebhotile.
I-flavour oyithandayo kufuneka isetyenziswe ngumgca, ungenzi ukukhawuleza, uzinakekele kwisithethe senyama. Masiqale nge-gel I-Gel efanelekileyo yokuthululela i-Douche - ingasetyenziselwa njengentambo yokuhlamba. Ukucaca kwayo kuphethwe yintsimbi - isinyithi esinobugcisa siyakho kwi-series ye-Idylle. Ukuguquka ngokukhawuleza kwi-foam epholileyo, i-gel yenza ikhumba lihlambulule ngokuzonwabisa, ixesha lokuyeka: akukho nto enye ekhona kwindalo yonke, kuphela wena kunye nokuqhumisa okuvela kuThixo ...
Ukuphuma ekubhabheni , sinobude obungapheliyo, sigubungele umzimba ngomgca obunqambileyo wobisi okanye ukhilimu. Ubisi obisi Ubulungiselelo be-Douche kulula ukuyisebenzisa kwaye ngokukhawuleza ukuxhamla, ukuphucula kunye nokunika umzimba umzimba obunobunono obuhle. I-Creme Ideal uthele i-Douche ye-cream ye-cream ikhathaza isikhumba, isondlo kwaye ithambisa. Ii-particle ze-pearl eziqulethwe kwiindlela zokuthi umzimba uphuthumele nge-aura ephoqayo-oku kufuneka ukuba bekuyiyonkulunkulukazi wothando.
Kwakhona, siyakhumbula iphunga eliyintandokazi, ngeli xesha ekukhanyeni kwayo kunye nokutshintshana okutsha - kuyidlafantant Deodorant Parfume. Kwaye ekugqibeleni, uluhlu oluphezulu, njengesambatho sobukhosi, lulele uGuerlain Idill - isiphunga esitsha. Ngoku isitimela sepinki siza kuhamba nathi yonke indawo, sibaphoqa amadoda ukuba aphendule iintloko emva koko, kunye nabasetyhini-bangene kwizinto abazikhumbulayo ngokukhawuleza zexesha lonwabo. Kodwa u Guerlain Idill - isiphumo esitsha sisitshela kunye nangolunye uhlobo lothando: kwizinto ezizimeleyo nezizimeleyo. Ukuzinyamekela kufuneka kube ngumqondiso ochazwe ngumntu onothando.
Abantu abaphambili kwihlabathi eliqhumayo
Izimonyo zaseRashiya zendalo
I-DD-Cream: kwaye yintoni into entsha kuyo
Iimveliso zokhuseleko lweenwele ezifudumeleyo
Iimpawu zokuzicoca zezingane
Imifuno emnandi ephunga eluhlaza
Indlela yokuqonda ukuba umntu uthanda, kodwa uyawafihla
Iintlanzi zomlenze: izilwanyana zomntu
I-Asian lifting-cosmetics - yintoni imfihlo?
UAlyona Vodonaeva wambonisa isisu esisisu, isithunzi
Callanetics ngexesha lokukhulelwa
Iimpawu zokukhula kwimihla ngemihla
Indlela yokukhetha iwayini elungileyo
I-etiquette yokuthetha - imithetho yokunxibelelana ngokufanelekileyo
Isonka esivela kumgangatho ophezulu we-zucchini
I-pancake entle nge imbewu ye-poppy